Ciidamada Soomaaliya Oo Lagu Eedeeyey In Ay Xasuuq Ka Geysteen Gobolka Tigray. | Qorilugud News 24
January 22, 2022 - Written by qoriadmin
Hargeysa-(QorilugudNews24)-Ciidamo ka tirsan militeriga Soomaaliya ayaa lasoo tebiyay inay xadgudubyo waaweyn ka geysteen gobolka Tigray ee uu dagaalka ka socdo, inkastoo ay dowladda Soomaaliya horay u beenisay inay askar geysay gobolkaas oo ku yaalla Waqooyiga dalka Itoobiya.
Militeriga Soomaaliya oo garabsanaya kuwa dowladda Eritrea ayaa lagu eedeeyay inay xasuuq ka geysteen deegaanno ka tirsan Tigray, bilihii ugu horreeyay ee ka dambeeyay marka uu dagaalku billowday, sida laga soo xigtay dad goob joogeyaal ah oo uu wareystay wargeyska “The Globe and Mail” ee kasoo baxa wadanka Canada.
Markhaatiyaasha uu wargeyska la hadlay waxaa ka mid ah nin 52 jir ah oo magaciisa lagu soo koobay Gebretsadik, kaasoo sheegay inuu daggan yahay xaafadda Zebangedena ee ku taalla waqooyiga-bari ee gobolka Tigray.
“Meydadka wadaad diimeedyo oo madaxa uu ka go’an yahay ayaan ku arkay waddooyinka xaafaddeyda, bishii December ee 2020-kii,” ayuu yiri.
Gebretsadik ayaa intaas ku daray: “Ciidamada Soomaalida oo qabsaday xaafaddeyda ayaa si gaar ah u bartilmaameedsaday kaniisadaha waxayna laayeen baadariyaasha. Way gowraceen.” Ciidanka Soomaalida iyo Ereitrea ayaa xaafaddaas ku sugnaa ilaa dabayaaqadii bishii February, sida uu sheegay ninkan ka midka ah dadka deegaanka
Dagaalka Tigray ayaa billowday bishii November ee sanadkii 2020-kii
Dadka kale ee xogta laga soo xigtay waxaa ka mid ah beeraley 32 jir ah oo la yiraahdo Berket, kuna sugan xaafadda Mai Harmaz ee gobolka Tigray, kaasoo yidhi: “Ciidanka Eritrea su’aalo ayay ku weydiinayaan ka hor inta aysan ku dilin, balse kuwa Soomaalida ah ma sameeyaan sidaas.” Waxa uu intaas ku daray in baadariyaasha la dilay uu ka mid ahaa Nin ay deris ahaayeen oo 76 jir ahaa.
Hase yeeshee Dowladaha Soomaaliya, Eritrea iyo iyo Itoobiya ayaa beeniyay inay isku xulafeysteen dagaalka Tigray oo hadda socda muddo ka badan hal sano.
Ma aha markii ugu horeysey ee ay soo baxaan wararka ku saabsan in Ciidamo ka tirsan Militariga Soomaaliya ay ka qayb-qaateen dagaalka gobolka Tigray.
Badhtamihii sannadkii 2021-kii, warbixin ka soo baxday Hay’adda Xuquuqda Addanaha u qaabilsan Qaramada Midoobey ayaa lagu sheegay in Ciidamo ka socday Soomaaliya oo tababar ku qaadanayay saldhig militari oo ku yaalla Eritrea in ay ku biireen dagaalka Tigray oo khasaare badan dhaliyey.
Dagaalkii Ka Dhacay Tigray.
Hadal haynta ku saabsan ciidamada Soomaalida ayaa ahayd mid sii xoogeysaneysey oo ka jirtay gudaha Soomaaliya halka ay xukuumadda uu hoggaamiyo Maxamed Xuseen Rooble ay ku adkaysaneysey inaysan ciidankooda tegin waqooyiga Itoobiya.
Waalidiinta Ay Ka Maqan Yihiin Dhallinyarada.
Bishii June ee Sannadkii la soo dhaafay, waxaa Magaalada Muqdisho ee Caasimadda Soomaaliya ka dhacay mudaharaad ay sameeyeen qaar ka mid ah waalidiinta dhalay Askartii la sheegay in tababarka Military loogu diray dalka Eritrea balse ay ka dagaalameen Itoobiya. Dadka dibed-baxayey ayaa dawladda ka dalbaday in dalka dib loogu soo celiyo Askartaas.
Waalidiinta ayaa doonayay inay ogaadaan halka ay carruurtooda ku sugan yihiin, kaddib markii ay soo baxeen wararka sheegaya in ciidan Soomaali ah loo diray dagaalka gobolka Tigray.
Ra’iisul Wasaare Maxamed Xuseen Rooble, ayaa xilligaas Magaalada Muqdisho ku magacaabay guddi soo baadha cabashada ay waalidiinta ka qabaan ubadkooda ka maqan. Ilaa iyo hadda wax war ah kama soo bixin guddigaasi.